Translator Profile: Chyu Po (chyupo) | TM-Town
The overall marketing strategy of an organization should focus on developing relationships with customers to understand their needs, and to develop goods, services, and ideas to meet those needs. လုပ်ငန်း ၁ခု ရဲ့ ဈေးကွက် နည်းဗျူ ဟာ က ယေဘုယျ အားဖြင့် ၀ယ်သူ များရဲ့ လိုအပ် ချက် များ ကို ဖြစ်လာ ဖို့ ရန် စိတ်ကူး အကြံဥာဏ် များ ၊ ကုန်ပစ္စည်း များ ၊ ၀န်ဆောင်မှု တွေ ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရန် သူတိုရဲ့ လိုအပ် ချက် တွေ ကို နားလည် ဖို့ ရန် ၀ယ် သူ များ နဲ့ ရင်းနှီး ဆက်နွယ်မှု အခြေအနေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ခြင်း အပေါ်မှာ အလေးအနက် အာရုံ စူးစိုက်သင့် ပါတယ်
Information Gathering: research potential customers, their needs, and spending habits in order to understand what sort of product, service, or idea they wish to buy. အချက် အလက် စုဆောင်းခြင်း ။ ။ ရှိပြီးသား ၀ယ်သူများ ၊ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက် တွေ နဲ့ သူတို့ ဘယ် လို ပစ္စည်း ဘယ်လို ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဘယ်လို စိတ်ကူး အကြံဥာဏ် နဲ့ ၀ယ်ချင်လဲဆိုတာ နားလည်ဖို့ရန် အတွက် သူတို့ရဲ့ သုံးစွဲမှု အလေ့အကျင့် များ ကို သုတေသန ပြုလုပ်ပါ။
Evaluation of Organization Capabilities: decide what your organization can produce relatively well, and what your organization is not capable of producing based on the organization's specific strengths and weaknesses. လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် ကို အကဲဖြတ် ခြင်း။ ။ လုပ်ငန်းရဲ့ အသေးစိတ် အား သာ ချက်၊ အား နည်းချက် အပေါ်မှာ အခြေခံ ပြီး သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းက ဘာကို ထုတ်လုပ် ဖို့ မဖြစ်နိုင် လဲ ဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့ လုပ် ငန်း က ဘာကို ကောင်း ကောင်း ထုတ်လုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။
Identify Market Opportunities: research the current market foraproduct idea, and look for an opportunity; such as no competition or strong demand. ဈေးကွက် အခွင့်အလမ်း များကို သတ်မှတ်ခြင်း။ ။ ပစ္စည်း၁ခုထုတ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး အကြံဥာဏ် အတွက် လက်ရှိ ဈေးကွက် ကိုသုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ၀ယ်လိုအား မရှိသော အစရှိကဲ့ သို့သော အခွင့်အလမ်း ၁ခုကို ရှာဖွေခြင်း
Set Objectives of Marketing Strategy: decide what results need to be achieved in order to reach the organization's goals; such asaspecific increase in sales, or net profits. ဈေးကွက် နည်းဗျူဟာ၏ ရည်ရွယ်ချက်သတ်မှတ်ခြင်း ။ ။ လုပ်ငန်းရဲ့ ရောင်းအား တိုးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသားတင်အကျိုးအမြတ် အစရှိသကဲ့ သို့သော ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင် ကို ရောက် ရှိရန် အတွက် ဘယ်ရလဒ် တွေ က အောင်မြင်ပြီးမြောက် ဖို့ လိုအပ် လဲ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ ။
Formulate an Action Plan: List the specific steps the organization needs to take in order to implement the marketing plan, and assign the responsibilities to specific staff members. လုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ် တခုကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ ဖော်ပြခြင်း။ ။ ဈေးကွက် အစီအစဉ် ကို အကောင် အထည် ဖော်ပြီး ရယူ ဖို့ရန် အတွက် လုပ်ငန်းက လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ်အဆင့်များကို စာရင်း ပြုလုပ် ပါ ၊ သီးသန့် ၀န်ထမ်း အဖွဲ့ ၀င် များ ကို တာဝန် များ ခွဲဝေ သတ်မှတ်ပေး ပါ။
Monitor & Evaluate: Study the marketing plan regularly, at least once per quarter, to track performance against the set objectives. စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲခတ်ခြင်း ။ ။ သတ်မှတ်ထားသော ရည်ရွည်ချက် နှင့် မျှတသော လုပ်ဆောင်ချက် တွေ ကို ရှာဖွေဖို့ ရန် အနည်းဆုံး ၃လ တစ်ကြိမ် လောက် တော့ ပုံမှန် ဈေးကွက် အစီအစဉ် ကိုလေ့လာစူးစမ်း ပါ ။
Proficiency, Reliability, Integrity
Message Chyu Po